Funda amakhono wedijithali ku-WhatsApp, ngesiZulu, mahhala!
INingizimu Afrika ibhekene nokwentuleka kwamakhono okuwumthelela wokwanda kwezinto zobucwepheshe. Izakhamuzi zidinga ukufunda ngesisekelo samakhono obucwepheshe, lokhu kufaka nolwazi lokusebenzisa ikhompyutha, ukuthi usesha kanjani, kanye nokuhlola, ulwazi ku-inthanethi. Lolu lwazi lungabachushisa ekwazini izinto ezahlukene njengolwazi lokuzivulela ibhizinisi elincane noma ukubona izindaba ezingelona iqiniso nabenza ubukhonyovu ku-inthanethi. Izinkundla zokufunda ku-inthanethi azibasizi abantu abaningi eNingizimu Afrika. Izifundo zisebenzisa … Read more
Categories News Tags Diji, diji.africa, i-Whatsapp chatbot, Izinkundla zokufunda ku-inthanethi
Ukunwetshwa kweMtateni nokwakhiwa kweDurban Eye
EMtateni indawo yokuthutha enkulukazi futhi ematasa kakhulu kunazo zonke ezinye eNingizimu Afrika. Lendawo ephethwe inkampane iTransnet, kubikwa ukuthi bafuna ukuyinweba ngokuphindwe kawu-4 ukuvuleka kwayo njengamanje. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu kumaspala omuhle nongemuhle. U-Adrian Peters, oyiChief Strategy Officer eThekwini, wathi uhlelo lweTransnet luza namathuba kanye nobungozi. UPeters wabika ukuthi imigwaqo ehlukene kanye nemihubhe nxazonke zedolobha zibonakalisa … Read more
Categories News, Places Tags Durban Eye, eThekwini Municipality, Port of Durban, Transnet